Shirkada Coca-Cola oo iska dhaaftay magaca Mohammed | shumis.net
Home » Layaab » Shirkada Coca-Cola oo iska dhaaftay magaca Mohammed
Shirkada cabitaanka Coca-cola ayaa go’aan ku gaadhay in aysan dhalooyinkooda ku qorin magaca nabiga Mohammed (nnkh). coca-colaAfhayeen u hadlay shirkada Coca-cola ayaa sheegay in ay isaga dhaafeen magaca Mohammed si ay uga fogaadaan xiisad ka dhalata arintaas.
Shirkada Coco-cola ayaa bilaabaysa olale ay magacyada ugu caansan Sweden ku badalayso magaca shirkada ee ku qoran caagadaha iyo dhalooyinka cabitaanka. Magacyada caanka ah
sida Daniel, Anna, Emma, Sara iyo Johan ayaa ka mid ah magacyada loo doortay olalahaan. Magaca Mohammed ayaa ka mid ah magacyada ragga ee ugu caansan Sweden.
Title: Shirkada Coca-Cola oo iska dhaaftay magaca Mohammed